दाङको गढवा गाउँपालिकामा कांग्रेस र माओवादीको रोचक प्रतिस्पर्धा, एमाले तेस्रो – नेपाली जनता :: Nepali Janta:
दाङको गढवा गाउँपालिकामा कांग्रेस र माओवादीको रोचक प्रतिस्पर्धा, एमाले तेस्रो
दाङ । दाङको गढवा गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । २०७४ सालमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद जितेको एमालेका उम्मेदवार भने यसपटक तेस्रो स्थानमा संघर्षरत छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख पदका उम्मेदवार सर्वजित डिसी र नेकपा माओवादी केन्द्रका यमनारायण शर्मा पोख्रेल झिनो मतअन्तरले अगाडि– पछाडि छन् ।
गाउँपालिकाको वडा नं. ८ र ७ को मतगणना सम्पन्न हुँदासम्म माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पोख्रेल कांग्रेसका डिसीभन्दा १० मत अन्तरले अगाडि थिए । दुई वटा वडाको गरी ३ हजार ३९७ मतगणना हुँदा माओवादी केन्द्रका पोख्रेलले ९१० मत प्राप्त गरेका थिए भने कांग्रेसका डिसीले ९०० मत ल्याएका थिए ।
त्यस्तै एमालेका उम्मेदवार सहजराम यादवले भने ४९१ मत ल्याएका थिए ।
आज बिहानबाट वडा नं. ६ मा मतगणना सुरुभएसँगै कांग्रेसका उम्मेदवार डिसी पुनः अगाडि आएका छन् । उक्त वडामा ३०० मतको गणना भइरहँदा माओवादी केन्द्रका पोख्रेललाई कांग्रेसका डिसीले झिनो मतले उछिनेका छन् ।
पछिल्लो मतगणना अनुसार कांग्रेसका डीसीले १ हजार १२३ मत ल्याएका छन् भने माओवादीका उम्मेदवार यमरानायण पोख्रेलले १ हजार ११६ मत ल्याएका छन् । पोख्रेल कांग्रेसका चौधरीभन्दा ७ मतअन्तरले पछाडि छन् । दुवै उम्मेदवारबीच झिनो मतअन्तर भएकाले प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ ।
सुरुवाती अग्रता लिएको एमाले पछिल्लो मतगणनासम्म आइपुग्दा तेस्रोमा छ । एमालेका उम्मेदवार सहजराम यादवले ८९३ मत ल्याएका छन् ।
गढवामा अलिहेसम्म ८ र ७ को मतगणना भइसकेको छ । जसमा वडा नं. ८ मा एमालेले जितेको छ भने वडा नं. ७ मा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ ।
यता, उपाध्यक्षमा भने कांगे्रसकी उम्मेदवार शारदा चौधरी र एमालेकी उम्मेदवार सिता चौधरीबीच झिनो मतअन्तर छ । कांग्रेसकी शारदाले ८९५ मत ल्याएकी छन् भने एमालेकी सिताले ८४५ मत ल्याएकी छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस निर्वाचन आयोगलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन दिए सुुझाव
माओवादीसँग तालमेल गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपप्रमुख पदको उम्मेदवार बनेकी शान्ति चौधरीले ६४८ मत ल्याएकी छन् । गढवामा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तालमेल गरेका छन् ।
२०७४ सालको चुनावमा गढवामा गाउँपालिका जितेको नेकपा एमालेलाई यस पटक पार्टी फुटको असर परेको छ । अघिल्लो चुनावमा एमालेबाट प्रमुखमा पदमा निर्वाचित भएर पुनः उम्मेदवारी दिएका सहजराम यादव तेस्रो स्थानमा संघर्षरत छन् ।
गढवा गाउँपालिका नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ ।
१,जेष्ठ.२०७९,आईतवार १५:२० मा प्रकाशित
५ सेकेण्ड अगाडी
गुल्मीको ईस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित
गुल्मीको मदानेको अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार निर्वाचित
आईपीओ आवेदन नि:शुल्कदेखि १० लाख कमका विद्युतीय सवारीमा भन्सार छुटसम्मका माग
रसुवाको कालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद कांग्रेसले जित्यो